रसुवा भन्सारमा ४ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन, निर्यात शून्य - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
रसुवा भन्सारमा ४ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन, निर्यात शून्य
११ माघ २०७८, मंगलवार ११:५८
रसुवा– रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेबाट रु. चार अर्ब ३३ करोड बढी राजस्व संकलन हुँदा निर्यात भने शून्य भएको छ ।
यो चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गत गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म रसुवागढी नाकाबाट आयात भएका चिनियाँ सामग्रीको भन्सार मूल्यांकनबाट प्राप्त राजस्वको आँकडा हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा रु. ४ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख ९ हजार संकलन भएको छ ।
कोभिड संक्रमणको सुरूआतपश्चात चिनियाँ पक्षले दैनिक नौवटा कन्टेनरमार्फत् रसुवागढीको मितेरी पुल छेउमा सामान पुर्याउने गरेको छ । व्यापारी, व्यवसायी र निजी कम्पनीमार्फत् आयात गरिएका सामग्रीमा लाग्ने शुल्कबापतको राजस्व असुली भएको हो ।
चीनतर्फ जाने निर्यात भने शून्य छ । दुई आर्थिक वर्षको राजस्व असुली तुलनात्मकरुपमा हेर्दा यसवर्ष झण्डै साढे दुई गुणाले बढेको छ । गतवर्षको यस अवधिमा रु. एक अर्ब ७२ करोड २४ लाख दुई हजार मात्र असुली भएको थियो ।
यस वर्षको वार्षिक असुली लक्ष्य भने रु. ६ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रहेको छ । सवारीसाधन बढी मात्रामा आयात हुन थालेसँगै राजस्वमा वृद्वि हुन थालेको हो । गत वर्षदेखि हालसम्म जुमक्रेन, टिपर, एम्बुलेन्स, माइक्रोबस, मिनीबस, जीप तथा कारसमेतका एक हजारभन्दा बढी सवारी आयात भइसकेको बताइन्छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सामान पल्टी गर्दा क्वारेन्टिनमा राखिएका कामदार मात्र मितेरी पुलमा परिचालन गरिएको छ । सामान पल्टी गर्ने स्थल पूरै घेरावाल लगाइ पिपिई लगाएका चालक एवं कामदारका अलावा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै भन्सार कर्मचारीले मात्र प्रवेश पाउने बताइएको छ ।